मान्छे कि मुर्ति ? चिन्नुहोस् त | PaniPhoto
मान्छे कि मुर्ति ? चिन्नुहोस् त	दिपध्वनी / August 21, 2012 /2Comments आज नर्बेको राजधानी ओस्लो घुम्दै गर्दा धेरै नयाँ कुराहरु देखिए । पहिले सोचेको थिएँ, यहाँ त माग्नेहरु नहोलान् । सोच विपरित माग्नेहरु ओस्लोका सडकमा धेरै देखिए । तर यहाँका माग्नेहरु हाम्रो काठमाण्डौंमा भए जस्ता पछ्याई पछ्याई माग्ने र ढोगेर हैरानै पार्ने चैं रहेनछन् । सडकको पेटीमा गिलास राखेर चुपचाप बस्नेहरु थिए । यीनीहरुले पनि याद राखुन् भनेर शानसँग एक क्रोनर पनि दिइयो एउटा माग्नेलाई । भनौं न, एउटा गरिबदेशको नागरिकले सभ्रान्त मुलुकका माग्नेलाई दान दिनुको अनुभव गरियो । तर यहाँको सडकमा माग्नेले भन्दा आफ्नो कला देखाएर पैसा माग्ने (माग्ने त यहाँ पनि आयो ।) हरु पनि निकै थिए । कोही गिटार बजाएर माग्ने, कोही जनवारको भेसमा बसेर माग्ने, कोही दलाई लामाको फोटो देखाएर माग्ने । (यसबारे पछि अर्को ब्लग लेख्नेछु ।)
यतिमा एउटा फरक दृष्यले भने मन खिच्यो । कोही माग्नलाई ठ्याक्कै मुर्तिकै भेषमा रहेको छ । दिनभर त्यस्तै । जो सुकै आउँन्, जे गरुन् एउटै पोजिसनमा कायम । ठ्याक्कै मुर्ति जस्तो हेर्दा पनि । फेरि केहीबेर घुम्दै गर्दा यहाँ पनि माग्ने मुर्ति जस्तै भएर बसेको रहेछ भनेको त, मुर्ति नै रहेछ । ठ्याक्कै मान्छे जस्तो । यसैले दुबैको फोटो यहाँ राखेको छु । हेरेर भन्नुस् है, कुन चै मुर्ति हो ? र, कुन चै मान्छे ?
यो फोटोको के हो ? तस्विरमा क्लिक गरेर ठुलो हेर्न सक्नुहुन्छ
अब तल यो अर्को फोटो हेर्नुस् ।
Tags: कि, चिन्नुहोस्, त, मान्छे, मुर्ति / Posted in: सन्दर्भ बिशेष
कविन राई says: August 22, 2012 at 3:48 am / Reply
कस्तो दुबै मुर्ति जस्ता देखिन्छन् र ध्यान दिएर हेर्दा दुबै मान्छे जस्ता देखिन्छन् फेरि । दुबै मुर्ति हुनु पर्छ । या दुबै मान्छे । कलाकारलाई चै मािनयो
manee gurung says: August 23, 2012 at 11:26 am / Reply
हुन त २ वटी मान्छे कै मूर्ति रहे छ फरक नदेखिये पनि लुगा लगाएको मूर्ति माग्ने मानिस हुनुपर्छ ….